1 Samuweli 24 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
24 Kwathi ke, kamsinya nje akubuya uSawule ekulandeleni amaFilisti,+ beza kuxela kuye, besithi: “Khangela! UDavide usentlango ye-En-gedi.”+ 2 Waza uSawule wathabatha amadoda anyuliweyo+ angamawaka amathathu kuSirayeli wonke waza waya kufuna uDavide+ namadoda akhe emaweni angenanto eebhokhwe zentaba.+ 3 Ekugqibeleni wafika ezibayeni zezimvu ezenziwe ngamatye zingasendleleni, apho kwakukho umqolomba. Ngoko wangena uSawule eze kuzithuma,+ ngoxa uDavide namadoda akhe babekwiinxalenye zomqolomba+ ezithe qelele ngasemva, behleli phantsi. 4 Aza athi amadoda kaDavide kuye: “Nantsi imini athi kuwe uYehova ngayo, ‘Khangela! Ndinikela utshaba lwakho esandleni sakho,+ yaye umele wenze kulo kanye njengoko kulungile emehlweni akho.’”+ Ngoko wesuka uDavide waza ngasese wanqumla isondo lesambatho esingenamikhono abenaso uSawule. 5 Kodwa kwathi emva koko intliziyo kaDavide yaba buhlungu+ ngenxa yokuba wayenqumle isondo lesambatho esingenamikhono abenaso uSawule. 6 Ngenxa yoko wathi kumadoda akhe: “Makube lee, kum, ngokwembono kaYehova, ukuba ndingenza le nto enkosini yam, othanjisiweyo+ kaYehova, ngokolula isandla sam nxamnye naye, kuba ungothanjisiweyo kaYehova.”+ 7 Ngako oko uDavide wawasasaza ngala mazwi amadoda akhe, yaye akazange awavumele ukuba asuke nxamnye noSawule.+ Ke yena uSawule, wesuka emqolombeni wahamba. 8 Ngoko uDavide wesuka emva koko waphuma emqolombeni waza wamemeza kuSawule, esithi: “Nkosi yam+ kumkani!” USawule wakhangela emva kwakhe, waza uDavide wathoba ngobuso bakhe emhlabeni+ waqubuda. 9 Yaye uDavide wahlabela mgama wathi kuSawule: “Kutheni na uphulaphula ilizwi lomntu,+ esithi, ‘Khangela! UDavide ufuna wenzakale’? 10 Yabona, kule mini amehlo akho abonile indlela uYehova abekunikele ngayo namhlanje esandleni sam emqolombeni; yaye uthile uthe mawubulawe,+ kodwa ndakusizela ndaza ndathi, ‘Andiyi kusolula isandla sam nxamnye nenkosi yam, kuba ingothanjisiweyo+ kaYehova.’ 11 Kwaye khawubone ke, bawo,+ ewe, khawubone nali isondo lesambatho sakho esingenamikhono esandleni sam, kuba ukunqumla kwam isondo lesambatho sakho esingenamikhono, andikubulalanga. Yazi uze ubone ukuba akukho bubi+ okanye mvukelo esandleni sam, yaye andonanga kuwe, ngoxa wena ulalele umphefumlo wam ukuze uwuthabathe.+ 12 Ngamana uYehova angagweba phakathi kwam nawe;+ yaye uYehova umele andiphindezelele+ kuwe, kodwa esam isandla asiyi kuba phezu kwakho.+ 13 Kanye njengoko umzekeliso wamandulo usitsho, ‘Kwabo bangendawo kuya kuphuma ubungendawo,’+ kodwa esam isandla asiyi kuba phezu kwakho. 14 Uphumelene nabani na ke ukumkani wakwaSirayeli? Usukela bani na? Inja efileyo na?+ Intakumba enye na?+ 15 Kwaye uYehova umele abe ngumgwebi, umele agwebe phakathi kwam nawe, yaye yena uya kubona, uya kulichophela ityala+ lam aze andigwebe ukuze andikhulule esandleni sakho.” 16 Kwathi ke, ngomzuzu wokugqiba kukaDavide ukuthetha la mazwi kuSawule, uSawule wathi: “Lilizwi lakho na eli, nyana wam Davide?”+ Waza uSawule waliphakamisa ilizwi lakhe walila.+ 17 Wahlabela mgama wathi kuDavide: “Ulilungisa ngakumbi kunam,+ kuba undenzele okulungileyo,+ kanti mna ndikwenzele ububi. 18 Yaye wena—wena ukuxelile namhlanje okulungileyo okwenzileyo kum ekubeni uYehova endinikezele esandleni sakho+ waza wena akwandibulala. 19 Ke kaloku ukuba kunokwenzeka indoda ilufumane utshaba lwayo, iya kulundulula na ngendlela elungileyo?+ Ngoko uYehova uya kukuvuza ngokulungileyo,+ ngenxa yokuba ngale mini ukwenzile oko kum. 20 Ke kaloku, khangela! ndazi kakuhle ukuba wena, nakanjani na, uya kulawula njengokumkani,+ nokuba ngokuqinisekileyo ubukumkani bakwaSirayeli buya kuqhubeka busesandleni sakho. 21 Ke ngoko ndifungele ngoYehova+ ukuba akuyi kuyinqumla imbewu yam emva kwam nokuba akuyi kulibhubhisa igama lam endlwini kabawo.”+ 22 Ngako oko uDavide wamfungela uSawule, emva koko uSawule waya ekhayeni lakhe.+ Ke yena uDavide namadoda akhe, benyuka baya kwindawo ekunzima ukuyifikelela.+